ဂရိတ်ဗြိတိန်မှစပိန်သို့ထွက်ခွာခြင်းကမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။ နားလည်ရန်သော့ငါးချက် | စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး
ဥရောပသမဂ္ဂ (EU) မှထွက်ခွာရန်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်စပိန်နိုင်ငံတွင်စတော့ရှယ်ယာဈေးကျဆင်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယနေ့ခေတ်တွင်များစွာပြောလျက်ရှိသည်။ သို့သော်ဤမျှလောက်မ ဒီအစီအမံစပိန်အပေါ်ရပါလိမ့်မယ်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်ဂယက်ရိုက် နှင့်စပိန်၏ဘဝ။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကမ္ဘာတွင်လက်ရှိပုံမှန်အခြေအနေ၊ စီးပွားရေးဆက်ဆံမှု သူတို့ကပိုမကြာခဏချိတ်ဆက်လေ့ရှိပါတယ်။
ယခုအချိန်တွင်ငွေရေးကြေးရေးထုတ်ကုန်များ၌အရင်းအနှီး၏အစိတ်အပိုင်းအများစုကိုလမ်းဘေးတွင်ထားခဲ့သည့်ထောင်နှင့်ချီသောချွေတာသူများရှိနေသည်။ စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်တွင်သာမကမေ့လျော့နေသောအခြားသူများအတွက်ပါ, နှင့်၎င်း၏ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ပင်၎င်း၏အစစ်အမှန်အကျိုးဆက်များကိုမသိစေခြင်းငှါ။ အဓိကကျသောငွေစုထုတ်ကုန်များ (အချိန်သိုက်၊ ဘဏ်စာရင်းများစသဖြင့်) ၏အခြားနည်းလမ်းများမရှိခြင်းကြောင့်စပိန်များကသူတို့၏စုဆောင်းငွေများကိုအာရုံစိုက်ရန်အသုံးပြုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေများကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့လျှောက်ထားသူများကိုပေးသော ၀.၅၀% အတားအဆီးထက်ကျော်လွန်ခဲသည်။
ပင်စင်အစီအစဉ်များကိုအခြားအဓိကသားကောင်များဖြစ်ကြသည် စပိန်စတော့ဈေးကွက်တွင်ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်များတွင်တိုးချဲ့မည် ဤဘဏ္financialာရေးထုတ်ကုန်အများစုသည်သူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစုစုကိုအစုရှယ်ယာများအထူးသဖြင့်ပိုမိုရန်လိုသောပုံစံများပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ ပြီးတော့ဒီခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာမင်းရဲ့ဘဝစုဆောင်းမှုတွေနည်းနည်းလောက်နည်းနည်းလျော့နည်းသွားတာကိုမင်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်ထိရောက်သောနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ချွေတာသူများသည်ဤကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေနည်းသွားလိမ့်မည်။
3 စပိန် - နိမ့်တင်ပို့မှု
4 အိမ်ခြံမြေဈေးကွက်တွင် Atony
ပိုမိုမြင့်မားပြီး ပို၍ အဆုံးအဖြတ်ပေးသောအဆင့်တွင်နိုင်ငံသားများကိုအများဆုံးစိတ် ၀ င်စားသည့်အရာတစ်ခုမှာရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းများမှဗြိတိသျှမှထွက်ခွာခြင်းသည်သူတို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်၎င်းတို့အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်နည်း။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ၌သင်၌ရှိသည်အကြံအစည်တ ဦး တည်းwillကန်အမှန်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အချို့သောအချက်ပေးမှုများကကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသလောက်မဝေးသော်လည်းတိုက်ကြီးဟောင်း၏ရထားပျက်ကျမှုမှလွတ်ကင်းစွာထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်သလဲ အလုပ်အကိုင်အတွက်၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးထပ်ကိန်းရှိလိမ့်မည် ဆန္ဒခံယူပွဲတွင်ဒီအငြင်းပွားဖွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပေါ်လာစေမည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
စတင်သူများအတွက်များစွာမှတ်ယူထားသောအဆင့်မြင့်သောအေဂျင်စီများသည် Brexit ကိုသတိပေးခဲ့သည် ဆိုလိုသည်မှာစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအပေါ်တစ်ဝက်ရာခိုင်နှုန်းရာခိုင်နှုန်းလျှော့ချခြင်းကိုဆိုလိုသည် လာမည့်နှစ်တွင်သည်။ လက်ရှိအစိုးရ၏ခန့်မှန်းချက်သည် ၂.၇% သာရှိသဖြင့်လာမည့်ဘဏ္fiscalာရေးနှစ်အတွက်စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (ဂျီဒီပီ) ကိုပြသလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးဘဏ္theာရေး ၀ န်ကြီးလူးဝစ်ဒီဂင်းဒင်းစ်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်းလက်ရှိဘဏ္fiscalာရေးနှစ်အတွက်၎င်းသည်မည်သည့်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ဒါဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ? ကောင်းပါပြီ၊ စပိန်စီးပွားရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနောက်နှစ် မှစတင်၍ ခရီးသွားလုပ်ငန်း မှလွဲ၍ ဤဆောင်းပါး၏နောက်ပိုင်းတွင်သင်မြင်နိုင်သည်။ သေးငယ်သော်လည်းဂျီဒီပီ၏ကျုံ့ဝင်မှုသည်အလုပ်အကိုင်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်ပြည်သူ့ဘဏ္financingာငွေနှင့်အလုပ်သမားများ၏လုပ်ခလစာညှိနှိုင်းမှုမူဝါဒပင်ဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးပညာရှင်အားလုံးကလူနေမှုအဆင့်အတန်းကိုသိသိသာသာကြီးထွားစေသောအချက်တစ်ဝက်၏သွေဖည်မှုသည်သိသာထင်ရှားမှုမရှိကြောင်းထောက်ပြကြသည်။
ဗြိတိသျှထွက်ခွာသွားမှု၏ပထမဂယက်ရိုက်ခတ်မှုသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဤနွေရာသီမှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသံသယမရှိပါ။ အကြောင်းပြချက်မှာဗြိတိန်ပေါင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ငွေကြေးဖြစ်သောယူရိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သိသိသာသာတန်ဖိုးကျလိမ့်မည်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့၊ ဒီလမှစပြီးအင်္ဂလိပ်ခရီးသွား dest ည့်ခရီးသွားများသိသိသာသာကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်။ ကဏ္ sector ကနေနောက်ဆုံးပေါ်ဒေတာကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၆ သန်းလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအယူအဆအတွက်စုဆောင်းယူရိုသန်းပေါင်းများစွာသည်များစွာလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ companies ရှိဟိုတယ်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များ၊ အရောင်းပြခန်းများ၊ ကားငှားရမ်းခြင်း၊ အပန်းဖြေခြင်းစသည့်ကုမ္ပဏီများအားလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများမရှိခြင်းကြောင့်ထိုကုမ္ပဏီများသည်အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိတော့ပါ ၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလျှော့ချပြီးအချို့ကိစ္စရပ်များတွင်စီးပွားရေးပိတ်သိမ်းသည့်အထိ (ကမ်းရိုးတန်းသို့မဟုတ်ကျွန်းခရီးသွားနေရာများသို့) ထို့အပြင်ဤအရာအားလုံးသည် ၀ န်ထမ်း ဦး ရေနည်းရန်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဤလုပ်ငန်းကဏ္segmentတွင်ငှားရမ်းခြင်းသည်ယခုမှ စ၍ နည်းသွားလိမ့်မည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါက၎င်းသည်အလုပ်အကိုင်အညွှန်းကိန်းအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည် Brexit ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ်သက်ရောက်မှု၏ချက်ချင်းအကျိုးဆက်အနေဖြင့်ဆယ်ပုံတစ်ပုံမြောက်များစွာကျဆင်းသွားလိမ့်မည်။
ဗြိတိသျှခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုသတိရသင့်သည် စပိန်သို့ visitors ည့်သည်များ၏ပထမဆုံးထုတ်ပေးသူဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေး ၀ န်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်သောနောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များအရ၊ ပြင်သစ်အထက်ဂျာမန်နှင့်အီတလီ။ ဤရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည်စပိန်နိုင်ငံရှိစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုကိုများစွာအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ပြည်နယ်သည်အထွေထွေနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်တွင်ပါ ၀ င်သောအခြားပစ္စည်းများကိုလည်းသက်ရောက်စေသည့်အတွက်ဤလှုပ်ရှားမှုအတွက်ငွေနည်းပါးစွာကောက်ခံလိမ့်မည်။
စပိန် - နိမ့်တင်ပို့မှု
ဒီခက်ခဲတဲ့စီးပွားရေးစစ်ပွဲမှာအရှုံးသမားတွေထဲကတစ်ခုကနောက်တစ်ခုပါ ဗြိတိန်တွင်အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူကုမ္ပဏီများသည်။ တစ်ဘက်တွင်ပထဝီမြေပုံပေါ်တွင်အဖြစ်မှန်သစ်ကိုထင်ဟပ်စေမည့်ပို့ကုန်မှတစ်ဆင့်။ ၀ န်ထမ်းများပပျောက်ရေး၊ သူတို့၏အကျိုးခံစားခွင့်များကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏ဘတ်ဂျက်များပိုမိုချိန်ညှိခြင်းတို့သည်ဤအတိုင်းအတာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
စပိန်ရွေးချယ်စာရင်းတွင်ဖော်ပြထားသောကုမ္ပဏီများသည်ဆန့်ကျင်ဘက်မဟုတ်ဘဲလွတ်လပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်အနက်ရောင်သောကြာနေ့စတော့ဈေးကွက်တွင်တီထွင်ခဲ့သည့်အတိုင်းအင်္ဂလိပ်စီးပွားရေးနှင့်ထိတွေ့မှုအများဆုံးသောသူများကိုဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များကအပြစ်ဒဏ်ပေးဆုံးဖြစ်သည်။ Banco Santander၊ Sabadell, Ferrovial, Iberdrola (သို့) Telefónicaတို့သည်ဤအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ သာတူညီမျှရှိ၎င်း၏ရွယ်တူချင်းထက်၎င်း၏စျေးနှုန်းအတွက်အပြုအမူနှင့်အတူ။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို၎င်းတို့သည်စျေးကွက်နေရာများကိုယခုမှ စ၍ ဖွင့်ရန်အန္တရာယ်အရှိဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤကဏ္ to သည်အုတ်နှင့်အလွန်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေသောကြောင့်ဤဆုံးဖြတ်ချက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံရလိမ့်မည်။ ယူရိုနှင့် ပတ်သက်၍ ပေါင်သည်၎င်း၏အလေးချိန်ကိုလျော့ကျသွားသောကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိအိမ်ခြံမြေဈေးကွက်အထူးသဖြင့်အားလပ်ရက်အပိုင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောအိမ်ရာဈေးကွက်တွင်ဗြိတိသျှအသုံးပြုသူများသည်သူတို့၏အနေအထားကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ အဲဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ အင်္ဂလိပ်စျေးကွက်သည်စပိန်ရှိသင်၏ဒုတိယအိမ်ကိုရှာဖွေရန်အတက်ကြွဆုံးဖြစ်သည်.
ဤလမ်းကြောင်း၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်ကဏ္inတွင်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းလိမ့်မည်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည်။ အလုပ်နည်းသည်။ ဤအရေးကြီးသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုရည်စူးထားသောကုမ္ပဏီများ၏အမြတ်အစွန်းလျော့နည်းစေသည်။ နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒါကြောင့်စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (ဂျီဒီပီ) ၏တိုးတက်မှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်၂၀၁၆ ၏ဒုတိယနှစ်ဝက်မှဆယ်ပုံတစ်ပုံအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဤချဉ်းကပ်မှုများမှစပိန်စီးပွားရေးကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤပြproblemနာကိုမေ့နေပုံရသည်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ကရှယ်ယာစျေးကွက်များတွင်ရက်စက်စွာကျဆင်းမှုကြောင့်စွန့်စားမှုပရီမီယံ၏ပြန်ခုန်ထွက်လာမှု အချက် (၁၇၀) ထိရောက်ရှိနေသည်နှင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာမမြင်ရ, မည်သည့်ကိစ္စတွင်။ ဤလမ်းကြောင်းသည်အမျိုးသားစီးပွားရေးကိုအလွန်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သည်။ လွန်ခဲ့သောလေးနှစ်ကဤအရေးကြီးသောမက်ခရိုစီးပွားရေးအချက်အလက်များထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်ခြင်းကိုမည်မျှအလေးထားကြောင်းသိရှိရန်လွန်စွာလုံလောက်သည်။
၎င်း၏ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းသည်အခြားအရာများအကြားဘဏ္financeာရေးအတွက်အခက်အခဲများပိုမိုများပြားလာစေသည်။ သို့မဟုတ်တစ်နည်းပြောရလျှင်၎င်းတို့သည်ပိုမိုမြင့်မားသောအတိုးနှုန်းကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုလိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်ရှိလိမ့်မည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ပြည်နယ်အသုံးစရိတ်များကိုတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိစေပြီးပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့်များသို့မဟုတ်ပညာရေးဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်များစသည်တို့နှင့်နိုင်ငံသားများနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိသောအခြားပစ္စည်းများမှဖြတ်တောက်ခံရခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။
အကယ်၍ ဂျာမန်ငွေချေးစာချုပ်များဖြင့်ပြန့်ပွားလာပါက၎င်းသည်စွန့်စားရငွေ၏မြင့်မားသောပမာဏဖြစ်သည့်တိုင်အခွန်တိုးမြှင့်ခြင်း၏အန္တရာယ်ရှိလိမ့်မည်။ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ အခွန်များမှသော်လည်းကောင်းဖြစ်စေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များ၏ကြေငြာချက်အပေါ်အခွန်မှသော်လည်းကောင်းဖြစ်စေသွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေ၊ တနင်္ဂနွေတွင်ကျင်းပသောအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်အစိုးရပေါ် မူတည်၍ ဖြစ်စေ။
သို့သော်စပိန်အကျိုးစီးပွားအတွက်အကြီးမားဆုံးသောအန္တရာယ်မှာပြင်သစ်၊ ဒိန်းမတ်၊ ဟော်လန်၊ ဆွီဒင်၊ ထိုအမှု၌, ဥရောပချဲ့ထွင်မှု၏ဖြစ်စဉ်ကိုကျိန်းသေပြိုကျလိမ့်မယ်။ စပိန်နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ။ အလားတူပင်စပိန်နိုင်ငံသည်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအရောင်းအဝယ်ဆိုင်ရာစာချုပ် TTIP ကိုတည်ထောင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မဟာမိတ်တစ် ဦး ဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်စာရင်းအင်းသက်သက်သာသာဖြစ်သည်၊ သို့သော်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အကူအညီနည်းပါးပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကြီးမားသောအရေးပါမှုရှိသောကြောင့်ဥရောပသမဂ္ဂသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏မရှိခြင်းကြောင့်အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများသို့လွှဲပြောင်းခြင်းခံရမည့်ရန်ပုံငွေနည်းပါးသည်။
ဤအချက်များအားလုံးသည်စပိန်စတော့စျေးကွက်ကိုလာမည့်ရက်များအတွင်းအကြီးအကျယ်တန်ဖိုးကျဆင်းသွားစေနိုင်သည်။ စတော့စျေးကွက်သုံးစွဲသူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများထက်အခြားပြန်လည်မြင့်တက်မှုအသွင်အပြင်နှင့်အတူထိုဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်သည်။ ရှယ်ယာများ၏နိမ့်သောစျေးနှုန်း၏အားသာချက်ကိုယူပြီး, စျေးကွက်ဝင်ရန်သူတို့ကိုအားပေးဖို့၏အချက်အထိ။
ပြီးခဲ့သည့်အမှု၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်္ဂလိပ်လူများကအတည်ပြုသည်ဤအတိုင်းအတာပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ရပါလိမ့်မယ်ဂယက်ရိုက်ချိန်ညှိဖို့လအနည်းငယ်လွန်မှစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်ချေသက်ရောက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ မည်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထုတ်မငြင်းပယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စီးပွားရေးဘဏ္Financeာရေး » အထွေထွေစီးပွားရေး » အကြပ်အတည်း » ဂရိတ်ဗြိတိန်မှစပိန်သို့ထွက်ခွာခြင်းကမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။ နားလည်ရန်သော့ငါးချက်
စားသုံးသူစျေးနှုန်းညွှန်းကိန်း IPC၊ အဲဒါကဘာလဲ။
Brexit ၏မျက်နှာကိုသင်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းဗျူဟာများ